Njupụta: Nchịkọta ekwentị maka Ndị Na-eme Mkpebi | Martech Zone
Njupụta: Nchịkọta ekwentị maka Ndị Na-eme Mkpebi
Monday, September 16, 2013 Monday, September 16, 2013 Douglas Karr
njupụta bụ mfe mobile ngwa nchịkọta ikpo okwu maka ndị mmepe iji tinye ọnụ. Ikpo okwu a gụnyere nyocha oge, mmekọrịta dashboard, njigide site na ndị otu, ngwa ngwa ngwa ngwa, akụkọ ntolite onye ọrụ na mbupụ data.
Ọkachamara, azụmaahịa na atụmatụ ụlọ ọrụ na-agụnye nyocha ego ha ga-enweta, nkewa onye ọrụ, ajụjụ ndị nwere ike ịkọwapụta, nke mgbasa ozi nchịkọta, nweta data nchekwa data na ntinye nke oma dabere na ngwugwu ị debanyere aha.
Ijikọta na njupụta naanị chọrọ otu akara nke koodu na ngwa gị. Ozugbo agwakọtara gị, ị ga-esochi kwa ụbọchị, kwa izu, yana kwa ọnwa ndị na-arụsi ọrụ ike, nnọkọ, njigide, ụdị ngwaọrụ, ikpo okwu, mba, asụsụ, ngwa ngwa, ọnọdụ, na ọtụtụ ndị ọzọ na igbe. Tinye akara nke koodu iji soro ihe omume ndị ọzọ n'ime oge.
Nkwupụta Ndochie Njupụta:
Tags: njupụtamkpumkpu akụkọmobile nyochamobile ngwa nyochanjigide ngwa mkpanakanyocha ngwa mkpanakanjigide ngwa mkpanaakanjide njide
Nyefee: Agụnala Nzukọ Ọgbakọ
Spigit: Organihazi Innovation